ပြည့်ဖြိုး (နည်းပညာမျှဝေခြင်း): March 2012
iphone အတွက် မြန်မာ Font သွင်းနည်း
ဒီ Post လေးကို Myanmar Mobile Development မှကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့
ဦးက သူ့ဖုန်းမှာ မြန်မာ Font သွင်းချင်တယ်ပြောလို့ ကျွန်တော်လိုက်ပြီးမွှေနှောက်ရှာဖွေနေတုန်း ဒီ Post
လေးကို တွေ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar Mobile Development ကို Credit ပေးပါတယ်။
iPhone တွေအတွက် မြန်မာ font သွင်းရလဲ ဆိုပြီး ကျွန်တော့်ဆီ Mail ပို့ ပြီး မေးလာတဲ့အတွက် ဒီ Post လေးကိုတင်လိုက်ပါတယ်။ ဒီနည်းကတော့ iOS 4.3.3 နဲ့ အထက် မြန်မာ Font နဲ့မြန်မာ Keyboard သွင်းနည်းလေးပါ။ အောက်မှာ Step by step ရှင်းပြသွားပါမယ်။
1. အရင်ဆုံး Cydia >> Manage >> Sources >> Edit >> Add ထဲကနေ cydia.macforus.com ကို add လိုက်ပါ။
2. Source Add ပြီးရင် URL ကို Verify လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတဲ့ အထိခဏစောင့်လိုက်ပါ။
3. ပြီးသွားရင် Cydia >. Manage >>Sources >> cydia.macforus.com ထဲကနေ Zawgyi iOS 4.3 Font ကိုရှာပြီး Install လုပ်လိုက်ပါ။
4. Font Install လုပ်ပြီးသွားရင် ဒီတစ်ခါ Keyboard ကို install လုပ်ပါမယ်။ Cydia >> Manage >>Sources >> cydia.macforus.com ထဲကပဲ Zawgyi Keyboard iPhone ကိုရှာပြီး install လုပ်လိုက်ပါ။
5. Zawgyi Font ရော Keyboard ရော install လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ Cydia ထဲကနေထွက်ပြီး
Settings >> General >> Keyboard >> International Keyboards >> Add New Keyboard >> ထဲမှာ Myanmar မြန်မာ ဆိုတဲ့ Keyboard လေးရှိလိမ့်မယ်။ အဲဒါကို Add လိုက်ပါ။
6. အပေါ်အဆင့်တွေ အားလုံးလုပ်ပြီး သွားရင်တော့ သင့်ရဲ့iPhone မှာ Myanmar Font ရော Myanmar Keyboard ရော ရသွားပါပြီ။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 12:40 AM No comments:
Labels: IT ဗဟုသုတ, Phone
iphone Manager လေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ နာမည်ကြီး Converter တွေအများ
ဆုံးထွက်တဲ့ Xilisoft ကထုတ်တဲ့ Xilisoft iPhone Magic Platinum v5.2.1.20120308 လေးပါ။ iphone
မှာပါဝင်တဲ့ Photo , Music , Movie , Ebook စတာတွေကို Manage လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ iphone နဲ့
Computer ကြားမှာ အသုံးပြုရန် သင့်တော်တဲ့ Software လေး ပါ။ သူ့ရဲ့ Feature တွေက လည်း များ
ပြားလွန်းလို့ ကျွန်တော်အသေးစိတ်မရှင်းပြတော့ဘဲ အောက်မှာဘဲ သူ့ရဲ့ မူရင်းဆိုဒ်ကနေပြီး ဖော်ပြပေး
ဒေါင်းရအဆင်ပြေရအောင် Link တွေအများကြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။အဆင်ပြေတဲ့ Link ကနေသာ
OS Microsoft® Windows XP (SP2 or later), Windows Vista,Windows 7
Download From Mirror Creator
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 11:00 PM No comments:
Advanced System Optimizer v3.2.648.13259
Blog မှာ Address Bar လေးပြေးနေအောင်လုပ်နည်း
CCleaner V 3.17.16888 Portable
Skype Setup 5.8.1.156
Angry Birds Space (2012) PC & ipad & Android (Ful...
iCare Format Recovery 4.6.3.3 (Full Version)
Hard Disk Sentinel Pro v4.00 (Full Version)
Internet Download Manager 6.11 Beta 1 Portable
Universal Sheld 4.6
Computer Desktop ပေါ်မှာ ipad လိုလေး သုံးကြည့်ရအောင...
Java Developer မြန်မာဘာသာပြန်စာအုပ်
Desktop Wall Papers Selection
Advanced SystemCare Pro v5.2.0.222
Gtalk Black Portable
Internet Download Manager 6.10 Beta 1
Photoshop Cs5 မြန်မာဘာသာပြန်စာအုပ်
Windows Server 2008 တင်နည်းမြန်မာလို
Abelssoft AntiBrowserSpy v3.6.108
Adoble Photoshop Cs3 Portable
Advanced Registry Clear v2.2.4.2 Portable
Abdobe Illustrator CS5 Portable
iPad အတွက် NBA ဘတ်စကက်ဘော ဂိမ်းလေးပါ
Vampire Saga 3: Break Out (2012/FINAL)
Avast Internet Security V7.0.1407 (2013 Key)
Xilisoft iPhone Magic Platinum v5.1.0.20120228
Raise Data Recovery (FAT & NTFS 5.2)
WinRaR_4.11 Final ( x86 & x 64 )
Screen Hunter 5.1 Portable